मूत्राशय को रूप मा
सौन्दर्य र स्वास्थ्य महिला सल्लाह
ब्लेडर साना श्वेत मा स्थित मूत्र प्रणाली को अंग हो। यो अंग खोलिएको छ, आवधिक रूपमा गुर्दे को बाहिर बहने तरल पदार्थ देखि भरिएको छ। मूत्राशय मूत्र भरी छ, यसको पर्खाल फैलिएको छ र पेशाब गर्न आग्रह गर्छ। मूडा र यसको संवेदनशीलताको संरचनामा निर्भर गर्दछ, यसको पर्खालले लिटर तरल गर्न सक्छ।
मूत्राशय को रुप - कारण बनता छ
केहि निश्चित अवस्थामा, पर्खालहरु को बहावले मूत्राशय को एक टुक्रा मा परिणाम हुन सक्छ। यो घटना ब्लडेर को निरंतर ओभरगोरो द्वारा पदोन्नति गरिएको छ, जो हुन्छ यदि यो भरी अवस्था मा व्यवस्थित हुन्छ, यो हो, जब महिला एकदम कम से कम शौचालयमा जान्छ। यसले छिटो वा पछि को पर्खाल को पतली सम्म र पूर्णता को समय मा प्रतिक्रिया गर्न को लागी उनको असक्षमता हुन्छ। त्यस्ता परिस्थितिमा, एक पूर्ण मूडर मात्र विस्फोट गर्न सक्छ।
ब्लेडडर भट्टराई प्रायः प्रायः यदि यो समयमा शौचालय जाने असम्भव छ भने प्रायः सम्भावना हुन्छ, र केहि प्रकारको मेकानिकल प्रभाव छ: यातायात, एक आकस्मिक अवस्था, पेटमा चोट, अनुहारमा झन् झन् झन् झन् झन् झन् झन्झट।
मूत्राशय को टूटना को लक्षण
मूत्राशय को बिरुवा को लक्षण परिस्थितियों मा निर्भर गर्दछ जसको तहत यो फट। पिल्भिक हड्डियों को भंग संग संयुक्त, टूटना को स्थानीयकरण extraperitoneal हुनेछ। यस्तो आघात लक्षणद्वारा गुणित छ:
रगतमा स्थायी दुखाइ र पबिस भन्दा माथि;
Peritoneum चिल्लो छैन।
यस्तो ब्रेक पुन: रेजजनको सहयोगमा स्थापना गरिएको छ।
मूत्राशय को इंट्रापरिटोनल टूटना, पेट मा गंभीर वृद्धि को दर्दहरु द्वारा प्रकट भएको छ, यसको सूजन, पेशाब संग समस्या (मूत्र प्रतिधारण, पेशाब को असंभव), मूत्र मा रक्त को उपस्थिति।
मूत्राशय को रूप मा - परिणाम
यदि समय मा समस्या निदान गरिएको छ भने सम्मिश्रण को भंग गर्न को लागी जटिलताहरू रोक्न सकिन्छ। यदि क्षति आंशिक छ भने, एक क्याथेटर मूत्रको गुफामा घुसिएको छ, मूत्र को माध्यम ले, जो मूत्र नाली, यो peritoneum र सानो pelvis मा प्रवाह गर्न अनुमति छैन। ब्लडेर को खाली गर्न को लागी साना टूटीरहरु आफु को निको पार्न सक्छ। अन्यथा, एक मूत्राशय बिरुवा को उपचार यसको पूर्णता को सर्जिकल बहाली मा हुन्छन्, लैर्गोस्कोपिक वा laparotomy द्वारा।
मूत्राशय को बिरुवा को खतरा यो हो, अल्पपरिवर्तनीय स्थानीयकरण संग, प्रायः आन्तरिक रक्तस्राव हुन्छ, र इंट्रापराइटोनल इंजेक्शन संग, पेट पेट गुहा, spikes र fistulas मा मूत्र को आगमन को कारण पेरिटोनाइटिस हुन सक्छ।
मूत्राशय रत्नको सबैभन्दा उत्तम रोकथाम पहिलो आग्रहमा यसको टाढाको निकासीको आदत हो। महिलाहरूलाई कम्तीमा प्रत्येक4घण्टा लेख्न सल्लाह दिइएको छ।
मैले कुन दिन प्रोलोक्टिनम लिनु पर्छ?
एक अप्रिय गंध संग पहेंलो छुट्टी
टेम्पोन कसरी घुसाउने?
मेरो अवधि प्राप्त गर्न के गर्न सक्छु?
मासिक चक्रको उल्लङ्घन
महिलाहरु मा नटुरुरिया
स्वास्थता पछि ब्रा
मासिकको सट्टा ब्राउन निर्वहन
हार्मोनल विफलता - कारणहरू
ग्लैन्डलुलर अन्तमेट्रियल हाइपरप्लाशिया
घरमा बस्ने कोठाको डिजाइन - उत्तम डिजाईन प्रविधिहरू जसले अनावश्यक गृह बनाउन मद्दत गर्नेछ
पाकका लागि दुई-घटक टाँस्ने
बिल्लियों को सबैभन्दा प्रसिद्ध प्रजाति
वसन्त-गर्मी 2014 ट्रान्स
जापानमा मनोरञ्जन पार्कहरू
कसरी एक बन्दरबाट बाँदर सिलाई
बहने कपाल संग वेडिंग केशियस
मेरिन मोनरो आहार
Adriano Celentano र Ornella Muti
विचारको शक्ति संग इच्छाहरूको निष्पादन
वजन घटाने को लागि उपयोगी भोजन
चिसोको लागि निन्द्रा
Gelatin - राम्रो र खराब
महिला कपडाहरूको फैशन ब्रान्ड
Roxer - प्रयोगको लागि संकेत
शरदमा कालो कवरेज कर्ट्टिंगको पुनरुत्थान